Ny Apple Watch 2 dia be siosion-dresaka | Avy amin'ny mac aho
Ny Apple Watch 2 dia be siosion-dresaka
Peter Rhodes | | Apple, Apple Watch, tsaho
Vao herinandro vao ny Apple Watch dia misy any Espana ary ny fiasa amin'ilay mety ho andiany faharoa amin'ny famantaranandro Apple dia aza mijanona amin'ny famoahana. Efa namaky tantara vaovao maro aho izay miresaka momba ny fanombohana ny ity famantaranandro nataon'i Apple ity dia fahombiazana na hanjary tsy hahomby.
Novakiako ihany koa ny vaovao iray izay nilazana fa mandraka ankehitriny dia tsy nahavita nivarotra 5,5 tapitrisa unit izy ireo, izay tsy ampy ho an'ny orinasa iray amin'ity kaliber ity ary vao mainka aza rehefa mitady vokatra kintana izay afindra any amin'ny kintana izy ireo tahaka ny nataon'ny iPod tamin'izany.
Tahaka ny efa niseho tamin'ny fitaovana hafa ao amin'ny orinasa, satria tonga any amin'ny tsipika fivoriambe ny drafitra sy ny mombamomba azy ireo mba hahafahan'izy ireo mampifanaraka ny masin'izy ireo amin'ilay maodely vaovao, dia manomboka mivoaka ny toetra mampiavaka azy izay matetika miafara amin'ny maha marina azy. Raha ny momba ny Apple Watch 2 dia toa efa vonona i Apple na saika vonona ny maodely vaovaony izay tokony hataony loha laharana amin'ny fisehoan'ny efijery ary ny fihenan'ny famirapiratan'ny endrika ivelany. Ho an'ity dia mety nanakarama Samsung sy LG izy mba hahafahany mitazona ireo takelaka OLED izay amboarin'izy ireo.
Etsy ankilany, misy resaka momba ny fanavaozana anatiny ny famantaranandro izay ahafahana manana bateria lehibe kokoa ary noho izany ny fahaleovan-tena lehibe kokoa. Raha ny motherboard no resahina dia ampiana chip WiFi tsy miankina ankoatr'izay fakan-tsary FaceTime eo aloha hahafahanao mampiasa telefaona finday ho toy ny web cam hanao antso an-tsary.
9to5Mac mahita mialoha fa ny fandefasana ny ny Apple Watch manaraka dia amin'ny lohataona 2016 ary tsy hitondra fiovana hatsarana sy endrika izany. Mety ho esorina amin'ny tanany ny akora hybrid eo anelanelan'ny vy sy ny volamena ary ny maodely vaovao misy tadiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny Apple Watch 2 dia be siosion-dresaka
mpamono Olona dia hoy izy:
Eny Ny ataon'izy ireo dia ny mandika sy mametaka amin'ny tranokala iray mankany amin'ny iray hafa. Nolazaina ihany koa fa hamoaka fahitalavitra i Apple, honohono ho zavatra lozika dia tena hadalana. Hanana iPhone 7 ihany koa isika
Mamaly an'i Killer
Daft dia hoy izy:
ary ny tsara indrindra dia hamoaka headphone vaovao. Feno lainga ho an'ny olona fohy ny Internet.
Valiny tamin'i Daft
Amboary ny olan'ny tranomboky iTunes rehefa manavao ny tsimbadika farany
Zava-misy vaovao momba ny gamut loko iPod vaovao